NOOCYADA UGU FIICAN EE DABOCASE EE XAAFADAHA IYO QAYBTA DHEXE: ARAGTI GUUD IYO TALOOYIN KU SAABSAN DOORASHADA XAGAL WANAAGSAN OO LOOGU TALAGALAY DHULKA - BEER CAGAARAN
Bartamaha Ruushka, kuleylaha barafka ah ee fudud oo aan kulaylaha kulaylka iyo qoyan. Guga, sida ugu dhakhsaha badan ee barafka hore u soo dego, dhulka ayaa horay u kulay qorraxda guga, laakiin weli waa u buuxsamay biyo kulul.
By bartamihii April, marka qorraxda horay u waraabisay dhulka ka dib jiilaalka, waqti wanaagsan ku yimaado beerista dabocase.
Warshadani waa maalin gaaban, waxay jecel tahay qoyaanka iyo iftiinka qorraxda - shuruudahan ayaa u oggolaanaya dadka degan gobolka Moscow iyo aagga dhexe in ay koraan miraha dabeysha oo dhan xagaaga.
Haddii aad ogtahay sifooyinka nafleyda iyo farsamooyinka beeraleyda ee dabocase, waxaad dooran kartaa noocyada saxda ah ee ku habboon beerista xaafadaha. Si aad u hesho goosashada hore ee dalagyada xididka succulent, abuur ah ee hore noocyada la beeray. Goosashada laga bilaabo June illaa dhammaadka bisha Agoosto waxay ka fiican tahay in lagu beero noocyo badan oo dhexdhexaad ah iyo Bisaylkiisa dambe.
Cagaarka abuurka wuxuu sii jirayaa 4-6 sano. Marka aad iibsaneyso abuurka, fiiri tan.
Dib u eegida noocyada khudradda leh qaangaarka
Aan kuu sheegno nooca noocyada radishes loo tixgeliyo ugu fiican ee beerista beerta furan ee gobolka Moscow iyo Central Russia.
Shuruudaha Bisaylkiisa hore ee dabocase - laga bilaabo 18 ilaa 25 maalmood. Beerista dhul furan waxay bilaaban kartaa badhtamaha April.
Ka hor inta beerto, miraha waa in lagu qooyay xal daciif ah ee daloolka potassium, ka dibna lagu meeleeyay maro qoyan iyo hayn heerkulka qolka 12 saacadood. Inta lagu jiro wakhtigan, abuurka ayaa soo jeedin doona iyo kadib markaad beertid caleemaha kowaad waxay u muuqan doonaan dhakhso.
Waxay leedahay dhadhan jilicsan, qaabab badan oo leh caarada cad.
Waxaanu kuugu soo bandhigi doonaa inaad daawato fiidiyow ku saabsan dabocad kala duwan oo quraac quraac ah:
Xidho jilicsan oo casiir leh oo midab casaan leh. Dabocase wuxuu hayaa caano ilaa 30 maalmood.
Root dalagga leh dhadhan macaan macaan, ma tuurin fallaaraha, xitaa leh saacadaha iftiin maalmeedka sii kordhaya.
Nooc wareegsan oo leh qaab dhadhan leh.
Kala duwanaantani waa midka ugu caansan oo loo adeegsado. Dalagyada rootiga waxay u bislaadaan 20 maalmood ka dib marka la beero, adkaysi u formation of fallaadho, siin dhalidda aad u sarreeya, dhadhan fiican.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyowga ku saabsan noocyada kala duwan ee dabocodka 18 maalmood:
Daboolka kala duwan ee dhexe-Bisaylkiisa ku bislaadaan 25-35 maalmood ka dib beero.
Marka laga beerto taariikh dambe, marka muddada saacadaha iftiinka maalinku kordho, waxay ufiican tahay in la xiirto sariiraha leh dabocase - tani waxay iska ilaalin doontaa muuqaalka xariiqda iyo ka sii daridda tayada dhadhanka ee xididdada.
Ripens 30 maalmood ka dib markii la beero, midhaha waa huruud ah, oo leh dhadhan casiir leh oo jilicsan.
Miraha casaanka cas ee leh jirka hilibka ah oo qallalan, bislaadaan 30 maalmood.
Miraha kala-soocay, oo leh dhadhan tartiib tartiib ah, hana haagin. Ilke kala duwan ayaa leh wax-soo-saarka wanaagsan..
Miraha waa dhexdhexaad, cabbir cad oo leh xididdada guduudan, waxooga soo noqnoqda 35 maalmood, oo aan maaddo u dillaacin, adkaysiga heerkulka sare.
Mid ka mid ah wakiilada ugu fiican ee noocyada bartamihii xilli-ciyaareedka, waxay gaaraan qibrada farsamo ee 35-40 maalmood, waxay u adkaysaa muuqaalka midabka, waxayna si fiican u ilaalineysaa muddada dheer ee kaydinta.
Kobcinta kala duwan ee dabiiciga ah waxay dhacdaa mudada u dhaxeysa 40 ilaa 50 maalmood. Dhammaan noocyada kala duwan waxaa lagu kala saaraa dhalidda sare, nolosha shelf dheer, ma ahan kuwo u nugul in bolting.
Miro casiir leh, oo leh kaydinta muddada dheer waxay ilaalisaa dhadhanka.
Waxaan soo bandhigi karnaa daawashada fiidiyowga buug-gacmeedka barafka:
Waxyaabaha kala duwan ee miraha cad, ku dhowaad ma foomka peduncles, fasalka ayaa si fiican loo hayaa oo leh dhadhan yar tartiib tartiib ah..
Khudaarta qallalan, oo tayo fiican leh.
Radish-giant, foomka quruxda, dhalaalaya, dhalaalaya, ka yar xaaladaha wanaagsan ee beerashada u gaaro 10 cm dhexroor. Haysashada dhadhanka iyo tayada ganacsiga. Jidhku waa caddaan, casiir leh, jilicsan, iyada oo aan lahayn hunqaaco iyo qandho. Tani waa mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee dabocase loogu talagalay koox dhexe, ku habboon ee sii kordhaya inta lagu jiro xilli.
Dabocase uma dulqaadan karo qalajinta ciidda, iyo sidoo kale waraabin badan. Ka dib markii la waraabiyo, waxaa lagama maarmaan ah in si dhaqso ah loo daboolo dhulka si qoyaanka u siman yahay siman. Haddii aadan sidaan sameynin, miraha ayaa dillaacaya oo luminaya dhadhanka.
Mid kasta oo ka mid ah noocyada ayaa si gaar ah loogu soo shubay si ay u koraan wakhtiga iyo aag gaar ah, sidaas darteed waa mid aad u muhiim ah in si sax ah loo doorto si loo helo goosashada wanaagsan.
Muhiim u ah in la xusuusto:
Roodhadu waxay ku koraan meelo iftiin leh.
Wuxuu jecel yahay dabacsan, ciid wanaagsan.
Wuxuu u baahan yahay waraabin joogto ah iyo labis.
Waxay ubaahantahay in ay hoos u dhigto saacadaha iftiinka maalinta 6-7 galabnimo.
Ha qaadan bacarimiso digada cusub.
Daawo qabow, waxaa lagu beeri karaa guga horraantii leh 10-15 maalmood oo dhan xagaaga.
Ka dib markii ay soo baxaan caleemaha, haddii beerto u soo jeestay in ay aad u qaro weyn, waxaa lagama maarmaan ah in dhuuban sariirta, haddii kale midhaha ma awoodi doonaan inay sameeyaan.
Tan iyo markii roodhadu ay yihiin dalag hore ah, ciidda beeritaanka waxaa la diyaariyaa xilliga dayrta, waxay qodayaan, waxay sameeyaan humus.Haddii aad raacdo sharciyadan fudud ee agrotechnology, waxaad yeelan doontaa khudrado cusub oo dhadhan fiican leh iyo cagaarka xagaaga oo dhan miiskaaga.